Home Wararka Taliyaha Ciidanka Amisom oo ka soo horjeestay amar uu bixiyay MW Farmaajo
Taliyaha Ciidanka Amisom oo ka soo horjeestay amar uu bixiyay MW Farmaajo
Madaxweyne Farmaajo ayaa saakay waxa uu amar ku siiyay Taliyaha Ciidanka AMISOM in uu ciidanka uu kala baxo Villa Hargeysa oo xafiis iyo deegan u ah Gudoomiyaha Baarlamaanka. Taliyaha Ciidanka AMISOM Sareeye Gaas, Jim Owoyesigire ayaa ku gacan seeyray codsiga Madaxweyne Farmaajo. Taliyaha ayaa u sheegay in mas’uuliyadda loo keenay ciidanka AMISOM ay tahay in ay ilaaliyaan difaacana hay’adaha dowlada iyo madaxda dowlada sidaas darteedna ayan marnaba cidlayn karin ilaalinta Gudoomiye Maxamed Mursal.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka dib waxa uu qadka taleefanka kula hadlay safiirka u fadhiya dowlada Ugadna Soomaliya isaga oo si gaar ah uga codsaday in AMISOM isaga baxdo deegaanka Gudoomiye Mursal ciidanka taabacsan Farmaajo ay ula wareegaan guriga Gudoomiye Mursal.
Wararka ka iimanaya xarunta Xalane ayaa sheegayo in safiirka Uganda u fadhiya Somaaliya Janaraal Fred Mugisha isna uu u sheegay in ayan ciidanka Uganda ayan marnaba qayb ka noqon karin xaalada siyaasadeed ee ka jirta dalka Soomaaliya. Waxaana loo sheegay Farmaajo in Uganda u siman tahay shacabka Soomaaliyeed. Farmaajo ayaa rajo badan ka qabay in ciidanka Uganda ay noqon doonaan kuwa uu u adeegsado in kula dagaalo mucaaradka Dowladda.
Previous articleSafiirka Qatar Xasan Xamza iyo Fahad Yasin oo dalka ka dhoofay
Next articleMuqadishu: Qiimaha lagu kala iibsado hubka culus oo maanta sare u kacay
(Xog): RW Kheyre oo is casilaya isuna soo taagaya Doorashada 2020/21.
Dagaal dib uga bilaawday deegaankii (Hiiraan) shalay lagu dagaalay